Heshiiska bilowga midnimada Falastiin - BBC News Somali
Image caption Heshiiska ma waari doonaa?
Falastiiniyiinta qaarkood waxay isugu soo baxeen jidadka Qasa ayagoo u dabaal degaya dib u heshiinta cusub ee dhex martay labada garab-siyaasadeed ee iska soo hor jeeday, Xamaas iyo Fatax.
Dad kale oo BBC ay la hadashay ayaa dareen ka qabay, laakinse waxay baahi weyn u qabeen in la soo afjaro cadaawadda tobanka sano dhex taallay oo ay dareensan yihiin inay dhaawacday dareenkii waddaniyadda.
Heshiiska waxaa ka soo shaqaysay Masar, waxaana la filayaa in maamulka Falastiiniyiinta oo Fatax ay hogaaminayso ay la wareegaan gacan ku haynta dhul-xeebeedka, wixii loo gaaro 1da Disembar.
Maamulka Falastiiniyiinta iyo ciidankooda amniga waxaa Qasa laga eryey 2007, markaas oo Xamaas ay gacan ku haynta la wareegtay, waana sannad ka dib markii ay ku guulaysteen doorashooyinkii sharci dejinta.
Naciim al Khatiib oo ah aabbe lix carruur ah dhalay wuxuu yiri "Xamaas waxay muujiyeen u jajabnaan aan hore loo filayn. Waxay na siisay rajo ah in dadku niyad wanaagsan yihiin, oo ay isu arkaan Falastiiniyiin, halkii ay isu haysan lahaayeen koox qayb ka ah islaamiyiinta dunida".
"Waxaa jira caqabado badan oo u baahan in wax laga qabto, laakin dib u heshiinta bil caksigeeda waxaa ah arrin aan qurxoonayn oo aan necbahay in aan dhex galno" ayuu sii raaciyey.
Dhawaan ayaa ku dhawaad labada malyan ee qof ee ku nool Qasa waxay ku dhibtoodeen kala qaybsanaanta siyaasadeed ee qotada dheer, ayadoo madaxweyne Cabaasna uu culays dhaqaale saaray Xamaas.
Image caption Biyaha dib loo sifeeyo ayaa la joojiyey, badda ayaana iminka lagu daraa.
Image caption Saacado go'an ayey Qasa koronto heshaa
Maamulkiisa waxay canshuur aad u badan ku soo rogeen shidaalka loo isticmaalo xarunta kaliya ee korontada siisa marinka, waxaana hoos loo dhigay xaddiga korantada ay Qasa ka soo iibsato Israa'iil.
Korantada iminka waxay timaadaa dhowr saacadood maalintii, waxayna arrintaas dhalisay in warshadda biyaha sifaysa iyo bullaaacadaha aysan si hagaagsan u shaqayn.
In ka badan 60,000 oo ah shaqaalaha maamulka ayaan weli helin wax mushaar ah. Inkastoo aysan shaqayn karin, haddana 3 meelood oo meel ayaa tiradooda la dhimay. Waxaa kale oo la hakiyey sahaydii dawooyinka.
Image caption Heshiiska waxaa saxiixay Azam al-Axmed oo ka socda Fatax iyo Saalax al-Aruri oo ka socda Xamaas.
Iminka waxaa la filayaa in xayiraadaaha la qaado. "Waxaan rajaynaynaa in korantadu ay dhakhsiyo noogu soo laaban doonto. Waxay aasaas u tahay nolosha caadiga ah" sidaas waxaa tiri Amal oo ah macallimad. "Waxay ila tahay in tani ay xallin doonto dhibaatooyinka naga haysta bullaacadaha" ayey sii raacisay.
Israa'iil iyo Masar waxay adkeeyeen hareereynta Qasa ka dib markii ay Xamaas la wareegtay. Heshiiska cusub ayaa la filayaa in uu u saamaxo maamulka Falastiiniyiinta inay la wareegaan gacan ku haynta halka xudduudda la isaga tallaabo, taasoo fududayn doonta dhaqdhaqaaqa dadka iyo badeecadaha.
"Waxaan doonaynaa in aan aragno dhaqdhaqaaq xor ah, gudaha iyo dibadda Qasa, daanta galbeed, Masar iyo Israa'iil ee dawooyinka iyo waxbarashada" ayey tiri Amal, waxayna intaa ku dartay "talaabooyinkaas waxay na dareensiinayaan in dib u heshiintu ay dhab tahay".
Heshiisyo hore ayaa degdeg u burburay, kan ugu dambeeyey ee Qaahira lagu gaarayna ma uusan kala caddayn sida loo xallinayo qodobbo muddo dheer la isku mari la'aa.
Waxaa ka mid ah mustaqbalka 25,000 oo ka tirsan garabka milateriga ee Xamaas, waa guutada Cisadiin al Qassam.
Xamaas waxaa kaloo Israa'iil, Maraykanka iyo midowga Yurub ay u arkaan inay tahay urur aragagixiso. Maraykanka iyo Midowga Yurub labada waa deeq bixiyeyaasha ugu waaweyn ee maamulka Falastiiniyiinta, waxaana ku adkaanaysa inay taageeraan xukuumad midnimo oo Xamaas ay ku jirto.
Image caption Maxamuud Cabaas wuxuu tegi doonaa Qasa 10 sano ka dib.
Wadaxaajoodyo adag ayaa la filayaa in iminka la qabto, ka hor kulan ay ka soo qayb gali doonaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee Falastiiniyiinta, kaasoo ka dhici doona Qaahira, 21ka Nofembar.
"dhowrka todobaad ee soo socda waa kuwo muhiim ah, sababtoo ah waa in la dhaqan galiyo wixii lagu heshiiyey. Dhamaan garabyada falastiiniyiinta, ma aha Xamaas iyo Fatax oo kaliya, waa inay go'aan ka gaaraan dawlad lagu midaysan yahay iyo taariikh doorasho la qabto" sidaa waxaa yiri Mustafa Barghuuti oo ka tirsan kooxda Palestinian National Initiative.
Wararka qaar waxay sheegayaan in haddii wax kasta ay u dhacaan sidii loo qorsheeyey, uu madaxweyne Cabaas markii ugu horraysay muddo 10 sano ah tegi doono Qasa, dadaal qayb ka ah dib u heshiisiinta.
Iminka waa 82 jir, sababtii ay doontaba ha noqotee Mr Cabaas wuxuu isha ku hayaa inuu ka tago dhaxal siyaasadeed, waxa kaga lumayana ma aha wax weyn.
Dhinaca Masar, waxay hogaamiyeyaashoodu danaynayaan in la hagaajiyo amniga gacan biyoodka Siinaay oo xudduud la leh Qasa. Ka dib sanooyin uu socday qas ka dhashay kacdoonkii carabta, waxay iminka eegayaan sidii ay u soo ceshan lahaayeen doorkii ay ku lahaayeen gobolka ee ahaa inay ka shaqeeyaan heshiisyada nabadda.